UyiLawula njani iAkhawunti yam yeShishini lePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 379
Enye yeenzuzo ezinkulu zeqonga lePinterest kukulawula iakhawunti yakho yeshishini ngendlela ecwangciswe kwangaphambili. Oku kwaziwa njengeHootsuite. Kwaye yinto esetyenziswa ziinkampani rhoqo, oku kubavumela ukuba balungelelanise ngendlela elula. Ke usomashishini unexesha elininzi lokulawula ezinye iinethiwekhi kwaye kunjalo nexesha elingakumbi lokuzinikezela kwishishini enjalo.
Ezinye zeendlela zokwenza ukuba iakhawunti yakho yeshishini isebenze ngakumbi:
Kukho iindlela ezizezinye zokwenza ukuba iakhawunti yakho yeshishini lePinterest isebenze ngakumbi, emva koko siza kukunika amanye amaqhinga onokuyisebenzisela inzuzo yakho:
Amaqhosha okugcina upapasho lwakho:
La maqhosha Zenzelwe abantu abanxiba iiplanga zakho yemifanekiso, kuhlala kuluncedo olukhulu ukuba abantu ababona iimpapasho zakho bafuna ukuzigcina, kwaye ukuba ubeka ezona ndlela zilula, ukuthengisa kwakho kuyonyuka ngokucacileyo, oku kunokwenziwa ngomfanekiso ngamnye, okanye kuphela ngezo ufuna ukugqamisa ezona.
Kwiintanethi zentlalo enye yezinto ezinokukunika izibonelelo ezinkulu, kukungaguquguquki nokungaguquguquki, Oko kukuthi, ukuba uneakhawunti yeshishini apho upapasha kuphela ngamanye amaxesha, ukutsala abathengi abanokubakho ngekhe kusebenze.
Ukuba, kwelinye icala, uneakhawunti apho upapasha ngamaxesha athile, kwiiyure zezona traffic zininzi kwiwebhu, oko kukuthi, ebusuku, abalandeli bakho baya kuyibona kwaye baya kuzimamela iindaba zekhasi lakho, eya kuba yinto enye eya kukusebenzela, kuba iyakuthetha kakhulu kakuhle uxanduva lwakho kwinkampani yakho.
Umxholo otsala amehlo:
Ngokuphathelele kwinto oyipapashayo, unokufumana eyona mveliso intle kwihlabathi, kodwa ukuba awuyazi nyusa ngokufanelekileyo Awuyi kuba nakho ukuyithengisa, khumbula ukuba njengothando, iimveliso nazo zingena ngamehlo.
Kule meko, sicebisa ukuba usoloko unika eyona mveliso ingcono kwaye ukhethe eyona mifanekiso mihle kubo, khathalela ukukhanya kunye nokungafani kwemibala kunye nemvelaphi. Dlala ngemibala kwaye uhlala ujonga ezona ndawo zibalaseleyo zeefoto.
Sebenzisa amagama achanekileyo:
Ngelixa kuyinyani ukuba ukubala okubonakalayo, ngakumbi kwesi sicelo, inkcazo elungileyo yeemveliso kwaye ngaphezulu kwako konke isikhokelo esifanelekileyo sendlela kunye nokubafumana phi kwiwebhu, zikwangundoqo, zama ukujongana nabantu ngeyona ndlela yendalo usebenzisa ulwimi oluhambelanayo nolungqinelanayo nokupapashwa kwaye hayi nje iqela lamagama abanye abangayi kwenza ngqondo, kwanaxa bengoyena ndoqo wokufumana iwebhusayithi yakho.
Ezi zizinto ezinje ngezikhonkwane eziphezulu zokupapashwa kwakho, ndithetha ukuthini ngale nto, ukuba ulumkile uyakukhangela eyona foto ifanelekileyo yezona mveliso zaziwayo zentengiso yakho kwaye uya kuyigxininisa ngethegi yemeta, eya kuthi iphambukise abathengi kwiwebhusayithi yakho, apho banokujonga khona ikhathalogu epheleleyo yento oyibonisayo kunye nokwandisa amathuba okuthengisa.
1 Ezinye zeendlela zokwenza ukuba iakhawunti yakho yeshishini isebenze ngakumbi:
2 Amaqhosha okugcina upapasho lwakho:
4 Umxholo otsala amehlo:
5 Sebenzisa amagama achanekileyo:
6 Izikhonkwane zeRichs: